စတစ်ကာများကို Telegram မှ WhatsApp | သို့ လွှဲပြောင်းနည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Telegram မှစတစ်ကာများကို WhatsApp သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
Ignacio Sala | 22/10/2021 22:00 | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ကွေးနနျးစာ
လက်တွေ့အားဖြင့် 2014 ခုနှစ်တွင် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် Telegram သည် စံပြစာတိုပေးပို့ခြင်းပလပ်ဖောင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုရုံတင်မကဘူး။ စာသားနှင့် အသံမက်ဆေ့ဂျ်များ ပေးပို့ခြင်း၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဖိုင်များကို မျှဝေပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆိုမှုများကို စတစ်ကာများ၊ ကာတွန်းစတစ်ကာများနှင့် GIF များဖြင့် လှုပ်ရှားစေပြီး စတင်လိုက်ကတည်းက ဘက်စုံပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် WhatsApp ကပြသခဲ့သည်။ သင့်လျှောက်လွှာတွင် အလုပ်လုပ်ပုံမပေါ်ပါ။ (နောက်မှရှင်းပြပါ့မယ်) ကာတွန်း GIF များနှင့် စတစ်ကာများအတွက် ပံ့ပိုးမှုအကောင်အထည်ဖော်ရန် အချိန်အတော်ကြာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အထိ ၎င်းသည် အပြန်အလှန်ပလပ်ဖောင်းပံ့ပိုးမှုကို မပေးခဲ့ပေ။
မင်းသာ Telegram ကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ရင်အထူးသဖြင့် WhatsApp ပျက်ကျသည် (သို့) အလုပ်မလုပ်ပါ ခဏတာ၊ ဒါဟာမင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့မှာသေချာပါတယ် ကာတွန်းနှင့် အငြိမ်နှစ်မျိုးလုံး စတစ်ကာအများအပြားအပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ WhatsApp တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို (အလွန်) မိုက်မဲခြင်းတွင်သာ ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ကာတွန်းနှင့်ငြိမ်စတစ်ကာများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိသော။
iPhone အတွက် WhatsApp Stickers ကိုမည်သည့်နေရာတွင် download ချ၍ ဖန်တီးရမည်နည်း
ဒီပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းက ဖြတ်သွားမယ်။ WhatsApp တွင် Telegram စတစ်ကာများကို အသုံးပြုပါ။မရ။ Play Store တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကို ဖန်တီးနိုင်စေမည့် အပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ထို့အပြင် Telegram စတစ်ကာများကို WhatsApp သို့လွှဲပြောင်းလိုသောသုံးစွဲသူများအတွက်စံပြအပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုလည်းငါတို့ကသူတို့ကိုအစကနေမဖန်တီးဘဲရှောင်ကြဉ်သည်။
ငါလျှောက်လွှာအကြောင်းပြောနေတာပါ စတစ်ကာများ ConvAndroid အတွက်သာရနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 StickerConv ဆိုတာဘာလဲ
2 Telegram စတစ်ကာများကို WahtsApp သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
3 WhatsApp သို့စတစ်ကာအထုပ်များထည့်နည်း
4 WhatsApp မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောစတစ်ကာများကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ။
StickersConv သည် Play Store မှအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည် ကြော်ငြာများနှင့် အက်ပ်အတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပါဝင်သည်။ကြော်ငြာများကို ဖယ်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသော လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် ဝယ်ယူမှုများ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် အပလီကေးရှင်းအောက်ခြေရှိ နဖူးစည်းများဖြင့် ပြသထားသည့် ကြော်ငြာများ။
ဤအပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား WhatsApp တွင်ထည့်သွင်းထားသောစတစ်ကာများကို Telegram သို့ပေးပို့နိုင်စေပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Telegram မှ စတစ်ကာများကို WhatsApp သို့ လွှဲပြောင်းခွင့်မပြုပါ။
ဒီအက်ပ်က တကယ်လုပ်တဲ့အရာပါ။ စတစ်ကာများ၏တရားဝင်အရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Telegram အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Telegram အိုင်ကွန်များကို WhatsApp သို့လွှဲပြောင်းမည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်အက်ပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
Telegram vs WhatsApp: ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
ငါတို့ရှာနေတာကိုငါတို့မတွေ့ရင် ကျွန်ုပ်တို့သည် filters function ကိုသုံးနိုင်သည်။ WhatsApp အတွက် စတစ်ကာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အပလီကေးရှင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုသော စတစ်ကာအတွဲ၏ လင့်ခ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤအက်ပ်ဖြင့် WhatsApp တွင် Telegram စတစ်ကာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကာတွန်းစတစ်ကာများ အပါအဝင်. Telegram မှ WhatsApp သို့ ကာတွန်းစတစ်ကာများ၏ စကားပြောဆိုမှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် (တည်ငြိမ်စတစ်ကာများထက်) အနည်းငယ်ပိုကြာပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ အပလီကေးရှင်းသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ပိတ်သွားနိုင်သည်။
StickerConv - WA နှင့် Telegram အတွက် စတစ်ကာပြောင်းခြင်း။
Telegram စတစ်ကာများကို WahtsApp သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
အဘို့အဖြစ်စဉ်ကို WhatsApp သို့ Telegram စတစ်ကာများကိုသုံးပါ StickersConv အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်လျှောက်လွှာ၏အောက်ခြေတွင် WhatsApp အမည်နှင့်လိုဂိုကိုလိုဂိုနှင့်တကွပြသလိမ့်မည်။ WhatsApp ကိုကြီးကြီးမားမားပြခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သွားလိမ့်မယ် အပလီကေးရှင်းသို့ အိုင်ကွန်များကို တင်သွင်းပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Telegram သင်္ကေတကိုကလစ် နှိပ်၍ ၎င်းကိုကြီးကြီးမားမားပြသလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သွားလိမ့်မည်။ အခြားနည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ WhatsApp မှ Telegram သို့ အကြောင်းအရာများကို တင်သွင်းပါ။
ငါတို့လုပ်ချင်တာလုပ် စတစ်ကာများကို Telegram မှ WhatsApp သို့ လွှဲပြောင်းပါ။အထက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းကို ထားခဲ့ရမည်၊ ၎င်းသည် အက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကိုပြသထားသည့်ပုံဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Import key ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်သူတို့ပြသပါလိမ့်မည် Telegram ဝဘ်ဆိုဒ်မှ တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သော စတစ်ကာအတွဲများအပလီကေးရှင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောစတစ်ကာများမဟုတ်ဘဲ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် Telegram ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် configure ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Filter ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။ စတစ်ကာအထုပ်များကိုရှာပါ WhatsApp တွင် အသုံးပြုရန် စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp သို့ထည့်လိုသောစတစ်ကာများအထုပ်ကိုရွေးပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုရေးသောသူအားလုံးတို့သည် emoticons များနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်ပြသနိုင်ရန်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းသည်ကာတွန်းပုံသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် switch ကိုသေချာအောင်လုပ်ရပါမယ် ကာတွန်းကို ထားပါ။, ကို အသက်သွင်းထားသောကြောင့်၊ မဟုတ်ပါက၊ ကာတွန်းများသာ ကာတွန်းများကို ကျော်သွားပါမည်။
စတစ်ကာများ၏အမည်ဘေးတွင်ပြသထားသည့်ခဲတံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် WhatsApp သို့မတင်သွင်းမီစတစ်ကာအထုပ်၏အမည်ကိုမွမ်းမံနိုင်သည်။ ဒီ function ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုစတစ်ကာများကိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည် ငါတို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းအရာအလိုက်စုစည်းချင်ရင်သူတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင်
ထို့နောက် စတစ်ကာအထုပ်၏ စုစုပေါင်းအရွယ်အစား ထို့အပြင်၊ ၎င်းကိုရေးဖွဲ့သောစတစ်ကာများအားလုံး။
၎င်းတို့ကို WhatsApp တွင်ထည့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေသို့ ရွှေ့ပြီး နှိပ်ပါ။ WhatsApp သို့ထည့်ပါ။
လာမည့်ဝင်းဒိုးတွင်၊ အပလီကေးရှင်းသည် ထိုစတစ်ကာထုပ်ကို WhatsApp သို့ထည့်လိုသလားဟု မေးသည်။ ကိုနှိပ်ပါ။ ADD ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
WhatsApp သို့ တင်သွင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်း၏ ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားပါမည်။e သည် ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းထားသော စတစ်ကာအထုပ်ကို ပြပါမည်။.
တင်သွင်းမှုအောင်မြင်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp သို့သွားပါ စတစ်ကာတစ်ခု၏အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ အီမိုတီကွန်များနှင့် GIFs များ၏ အိုင်ကွန်ဘေးတွင် ရှိသည်။
Play Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသောအပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ WhatsApp တွင် စတစ်ကာအတွဲအသစ်များ ထည့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်သောစတစ်ကာများ။
သို့သော် သင်လိုချင်သမျှသည် ဖြစ်၏။ ရရှိနိုင်သောစတစ်ကာထုပ်အရေအတွက်ကို ချဲ့ထွင်ပါ။၊ သင်သည် ၎င်းကို လျှောက်လွှာမှ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ WhatsApp တွင်စတစ်ကာအထုပ်အသစ်များထည့်ရန် အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည့်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp စကားဝိုင်းသို့ ဦး တည်သည်။ စာသားအကွက်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ငါတို့ရေးချင်သလိုပဲ။
နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ စတစ်ကာအိုင်ကွန် မျက်နှာတစ်ခုနှင့်။
ထိုအခါ + sign ကိုနှိပ်ပါ ၎င်းကို စာသားအကွက်အောက်တွင် ဦးစွာပြသထားသည်။
အဲဒီတုန်းက သူတို့ပြမယ်။ စတစ်ကာအထုပ်အားလုံး WhatsApp မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည်။
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုငါတို့ထည့်နိုင်တယ် Add ကိုနှိပ်ပါ။
Play သင်္ကေတ (ညီမျှခြင်းတြိဂံ) ကိုပြသောသင်္ကေတအထုပ်များ ၎င်းတို့သည်ကာတွန်းသင်္ကေတများပါ ၀ င်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။
WhatsApp စကားဝိုင်းတစ်ခုမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စတစ်ကာတစ်ခုကို လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းကိုသိမ်းထားလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါသည်။ စတစ်ကာပေါ်တွင်နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ ပေါ်လာသောမီနူးတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ အကြိုက်ဆုံးသို့ထည့်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Telegram မှစတစ်ကာများကို WhatsApp သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
Acrotray: အဲဒါဘာလဲ။ ၎င်းသည်လုံခြုံပါသလား။